Instagram Nyaya: wedzera mapikicha uye mavhidhiyo kune yako nyaya (nematricks) | IPhone nhau
Instagram Nyaya ndeye, pasina mubvunzo, imwe yenhau huru dzevhiki. Kumhara kwazvino chebasa rakafanana chaizvo neiro ratakatovona muSpapchat Mune iyo yekutora mifananidzo pasocial network par kugona, zvakakonzera kusagadzikana, uye hazvishamise. Iko kugona kwekugadzira nyaya pa Instagram uye kudzigovana ipapo ipapo kunopa iyo app kushandisa nyowani yatisina kumbofungidzira kuti tichiona mairi, kunyangwe isu tichiri kusaziva kana zviri nani kana zvakaipa.
Nepo iro ramangwana richisarudza kana ichi chinhu chitsva chiripo kuti chigare kana chingosara chisiri chechokwadi, chakanakisa chatingaite kutora mukana nazvo. Uye, kunyangwe Instagram Nhau ichiri sarudzo yakakosha ichienzaniswa neSnapchat, ine zvimwe zvinonakidza zvinhu.
1 Nyaya dze Instagram chii icho?
2 Maitiro ekuisa pikicha pa Instagram nyaya
3 Maitiro ekuisa akawanda mafoto ku Instagram Nhau
4 Isa mavhidhiyo ku Instagram Nhau
5 Instagram nyaya, ndiani anovaona?
6 Instagram Nyaya Dzinonyengera
Nyaya dze Instagram chii icho?
Instagram Nyaya (Nhau mune yayo Chirungu vhezheni), ndiyo imwe nzira iyo Instagram yakatanga nguva yadarika kukwikwidza neSpapchat. Kiyi ye Instagram Nhau inyaya yekuti iwo akavakirwa pane ephemeral zvemukati, kureva kuti, mavhidhiyo uye mifananidzo yatinoisa inozogara masekondi mashoma kana ichinge yatariswa, uyezve ichatemwa.
Izvi zvemukati zvemukati zvinoramba zviri paprofile yedu kwemaawa makumi maviri nemana, uye zvobva zvabviswa. Inoshanda chaizvo senge Snapchat. Uye zvakare, idzi nyaya dzatinotora, zvese mukutora mifananidzo uye vhidhiyo, dzinogona kugadziriswa, kwete nemasefa, asi nemabhurashi, mhedzisiro, zvitambi uye Emojis izvo zvinotibvumidza isu kupa degree rekufarira ku Instagram Nhau, kunyanya mune izvo kugovana yakasarudzika nguva nevateveri vedu.
Maitiro ekuisa pikicha pa Instagram nyaya
Kuwedzera mifananidzo nemavhidhiyo zvakananga kubva kune yedu foto reel ndechimwe chazvo. Sarudzo iyo, kunyangwe chiri chokwadi kuti Snapchat yakaisawo munguva pfupi yapfuura, haina kunyatsofanana. Chekutanga pane zvese, Snapchat inokutendera iwe kurodha chero zvemukati pane reel, zvisinei nekureba kwayo. Zvakare, Mune Instagram Nhau iwe unogona chete kusarudza pakati peiyo yakawedzerwa kuraibhurari mumaawa makumi maviri nemana apfuura, chimwe chinhu chinofarira iko kungoitika kunoitirwa nerudzi urwu rwechikumbiro. Uye, chechipiri, nekuti pa Instagram izvo zvirimo zvicharatidzwa mune yakazara skrini, angave mafoto, screenshots kana mavhidhiyo, chimwe chinhu chisingagone paSnapchat.
Kuti tikwanise kuwana izvo zvirimo pane reel -maawa makumi maviri nemaviri apfuura, ngatirangarire-, isu tinongofanirwa kuenda kune zvemukati kutora chinyorwa chedu Instagram nyaya (mumufananidzo mukona yekumusoro kuruboshwe kana nekutsvedza nemunwe wedu Mupfungwa iyoyo) uye, kamwe mairi, tsvedza pasi. Mushure mekuita chiito ichi Thumbnails emavhidhiyo nemifananidzo yakawedzerwa kune reel panguva yekupedzisira karenda zuva richaratidzwa kumusoro, kugona kusarudza, kugadzirisa uye kurodha iyo yatinofarira zvakanyanya kunyaya yedu.
Maitiro ekuisa akawanda mafoto ku Instagram Nhau
Yedu Instagram Nyaya haina magumo, neizvi isu tinoreva kuti isu tinokwanisa kuwedzera inenge isingaverengeke nhamba yezvinyorwa kune edu Instagram Nyaya, zvinoenderana nenguva uye chishuwo chatinacho. Iko mashandiro akafanana chaizvo, kurodha pikicha muNhoroondo isu tinongofanirwa kuita matanho mune yapfuura dzidziso, kana kubata zvakananga iyo nguva. Kana tangoisa pikicha kune iyo Instagram Nyaya, isu tinodzokera kumain menyundiko kuti, iyo Timeline ye Instagram.
Iye zvino Isu tinotsvedza kuruboshwe zvakare uye tinogona kuwedzera pikicha kune iyo Instagram Nyaya kana kubata zvakananga nguva yatiri kuda, muvhidhiyo kana tikabatisa bhatani rekutora kwenguva yakareba, kana pikicha kana tikabata bata.
Isa mavhidhiyo ku Instagram Nhau
Isu tinotanga kubva pahwaro hwekuti isu tine nzira mbiri dzekuisa mavhidhiyo kuedu Instagram Nyaya, nekuti izvi tinogona kutanga tashandisa nzira yekutanga, iyo nzira yekutora. Tichaisa vhidhiyo nematanho anotevera:
Muiyo Instagram Timeline isu tinoshambira kubva kuruboshwe kurudyi kana tinya pa «wedzera Nhoroondo».
Tinotarisa zvatinoda kunyora
Isu tinosiya bhatani "rekutora" rakadzvanywa uye vhidhiyo icharekodwa
Kana vhidhiyo yacho yangonyorwa, kana kutemwa, sezvo iine muganho wenguva, tinogona kuigadzirisa sezvatinoda uye nekuiisa zvakananga kuImba yedu ye Instagram. Maitiro echipiri akafanana neayo atinoshandisa kuisa mapikicha yatinayo pane reel:
Tinotsvedza chigunwe kubva pasi kumusoro, kubvisa reel
Tinogona kusarudza vhidhiyo yakanyorwa mumaawa makumi maviri nemana apfuura
Vhidhiyo yacho ipfupikiswa kune yakanyanya kubvumidzwa ne Instagram Nhau
Uye iyi ndiyo nzira yakapusa yekuisa mapikicha uye mavhidhiyo kune ako Instagram Nyaya. Semazuva ese, muActualidad iPhone tinokuunzira iwo akanakisa ezvidzidzo kuti usarase ruzivo pane ako masocial network.
Instagram nyaya, ndiani anovaona?
Izvi zvakapusaZvichava zvinoenderana nekugadziriswa, iyo yekuvanzika. Uye ndezvekuti kana isu tine Instagram yakavhurika kuitira kuti munhu wese azvione, saka tinenge tisina nzira yekudzivirira chero rudzi rwemushandisi kuwana mukana kune yedu Instagram Nyaya. Naizvozvo, nyaya dzedu dzichagara dziri pachena kuruzhinji, mune izvi zviitiko zvinokurudzirwa zvikuru kuti tifunge kuti ivo vanozogona kuona zvinyorwa zvedu chero, muchokwadi, zvakajairika kuti vanoonekwa nguva nenguva mu Nhau dzinodyiswa nenzvimbo zvakatikomberedza. Kana ichigadzira chero mhando yekusahadzika, tinogona kugara tichitsvedza kubva pasi kumusoro kuti pakupedzisira tizive kuti ndevapi vashandisi vari kuona edu Instagram Nyaya.
Muchiitiko chekuti isu tine iyo Instagram "kuvharwa”Kuburikidza nekugadzirisa, vashandisi chete avo vatakapa mvumo yekutevera, kureva kuti, avo vane chikumbiro chekutevera chakagamuchirwa, ndivo vanozokwanisa kuwana yedu Instagram Nyaya. Mune ino kesi, kuvanzika kwedu kunofanirwa kutinetsa zvakanyanya kana isu takasarudzika nevashandisi vanotitevera.
Instagram Nyaya Dzinonyengera
Instagram Nhau dzine mikana yakawanda yekugadzirisa, zvisinei, dzimwe nguva inogona kuve yakaoma kuita, saka isu tinoda kukuitira iwe diki muunganidzwa wezve zvakavanzika uye zvinobudirira manomano ekuti zviitwe zvese kubva mu Instagram Nyaya. Saka kana iwe uchida kuti Nhau dzako dziratidzike dzakasiyana kubva kune wese munhu, zvisiyane zvishoma uye uwane mhinduro dzakanakisa (uye nekudaro nhamba yakakura kwazvo yevateveri), tora mukana weiyi runyorwa ne7 Instagram Nhau dzinonyengera chakanyanya kukosha kuti tinokuunzira nhasi.
Mira kutamba: Kumisa kuburitswa kweiyo Instagram Nyaya yatiri kuona, zvakaringana kusiya chigunwe ichimanikidza chero chikamu cheiyo skrini. Panguva iyoyo iyo Instagram Nyaya ichaenda "kumbomira". Patinosunungura munwe, inoramba ichitamba.
Enda kune rinotevera kana rapfuura vhidhiyo: Kuti tiende kune vhidhiyo inotevera kana yapfuura, isu tinongofanirwa kubaya padivi rekona rinoenderana nesu, kurudyi kusimudzira vhidhiyo kana kuruboshwe kuti udzokere kune yapfuura.
Sei post mavhidhiyo kubva kugalari: Kuti tibudise chero vhidhiyo kubva mu gallery, tinotora mukana wehunyanzvi hwambotaurwa, isu tinongofanira kutsvedza kubva pasi kumusoro kuMugadziri weNhau uye zvese zvirimo zvatakanyora mumaawa makumi maviri nemana apfuura zvichaonekwa, tinozvisarudza uye ichaiswa.
Ini ndinokurumidza sei kunyora iyo Instagram Nyaya? Eya, iyo inokurumidza nzira yekurekodha Instagram Nhau ndeyokusvetuka kubva kuruboshwe kuenda kurudyi pane Instagram Nguva, ipapo Musiki weNhau anozovhura nekukurumidza.
Unogona kuswededza kana kushandura kamera uchinyora Instagram Nyaya? Ehezve, kune izvi isu tinofanirwa kuita mitezo yakafanana nechero kamera, neminwe miviri ichiitambanudza ichawedzera. Zvakare kana tikadhinda kaviri nekukurumidza pachiratidziri tinogona kutora selfie.
Sei sarudza mamwe mavara mumagwaro ye Instagram Nyaya: Pamusoro pemakara anopiwa nechishandiso pachawo kana uchigadzira zvinyorwa mu Instagram Nyaya, tinogona kusarudza pakati pevara pendi kana tikabata kumanikidza kwenguva refu nemunwe pane imwe yeaya mavara.
Sei chinja iyo Instagram Nyaya ive yenguva dzose posvo: Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuenda ku Instagram Nyaya yatakaburitsa munguva pfupi yapfuura uye tinya pamatanho matatu mukona yezasi yekurudyi, ipapo mukana we govana sepositi.
Uye ava ndivo vanomwe Instagram Nyaya Dzinonyengera zvinowirirana izvo zvinokutendera iwe kuti uwane zvakanyanyisa kubva kune ako Instagram Nyaya, ikozvino enda unovagovana. Inguva yekushandisa zvese zvawakadzidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekuwedzera mapikicha uye mavhidhiyo kubva kune reel kune yedu Instagram nyaya
Silvia Mazariegos akadaro
chinhu chega chandiri kuda kuziva kuti pakombuta ndingaone sei nyaya iyo ibstagram
izvo zvandinoda kuziva
Pindura kuna silvia mazariegos
Luz Lopez akadaro
uye unogona kuifarira here?
Pindura luz lupez
Mifananidzo nemavhidhiyo zvinogona kudiwa mu instagram nyaya?
Ndiri kungoda kuziva kana ndichigona kuisa nyaya muIstagram kubva pc
Mhoroi, mubvunzo wangu mupfupi ... asi zvinotevera zvinondibata.
Ini ndinoisa nyaya uye ini ndoona kuti mumwe wevashandisi avo «anowanzo kundiona» mune imwe yenyaya inoratidzika kwandiri ndiri grey grey, uye inoti yakavanzwa ... (izvi zvinoreva ??? =) kana ndikasaigadzirisa kuitira kuti isandione, pane kudaro ... ini ndinomirira mhinduro, hapana aiziva kundiudza zvakanaka. Ndatenda
Apple ingadai yatove kuyedza akasiyana akawedzera Reality magirazi
Beat Fever, mutambo wemimhanzi werudzi rwaive pamberi